सवारी Koowheel विद्युत स्केटबोर्ड कहीं जान - Jomo प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
सवारी Koowheel विद्युत स्केटबोर्ड कहीं जान
जीवनको एक आधुनिक छिटो मा, सेतो कलर को सबै भन्दा लागि, बाहिरी गतिविधिहरु सप्ताह मा एक राम्रो खुशी छ। यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ: तिनीहरूले कसरी सहमत स्थान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? KOOWHEEL विद्युत स्केटबोर्ड ती फैशन जवान केटाहरु र केटीहरु लागि एक उत्कृष्ट विकल्प हुनेछ। यो पनि सम्म भीड मेट्रो देखि, शहर बस लिएर ट्राफिक जाम देखि ग्रस्त छैन भन्ने हो छ। ती जवान मानिसहरूले त्यो घृणा गर्छन्। तपाईं एक स्केटबोर्ड स्कूटर चयन भने, तपाईं यस्तो Climb रूपमा आफ्नो अद्भुत सप्ताहन्तमा आनन्द र के तपाईंलाई रुचि गर्न सक्नुहुन्छ। पनि स्ट्रबेरी छान्नुहोस् ब्याडमिन्टन प्ले। मात्र एक खुसी सप्ताह आनन्द तर साथीहरूसँग सम्बन्ध बढेको। त्यसैले, सवारी Koowheel विद्युत स्केटबोर्ड एक आदर्श विकल्प हुनेछ। किन चयन गर्नेछ Koowheel ई-स्केटबोर्ड ?
पहिले, यो भन्दा छ किफायती बिजुली स्केटबोर्ड एक सजिलै प्रतिस्थापन ब्याट्री प्याक संग। यसलाई विशेष Brushless संग डिजाइन छ, दोहरी मा-पाङ्ग्रा हब मोटर्स,ब्लुटुथ वायरलेस रिमोट नियन्त्रण र लचीलापन लागि टिकाउ क्यानाडा मेपल को7तहहरू। यसको अधिकतम गति 40 कि.मि. / घन्टा छ र ग्याँस guzzling वा सबै पैदल वा साइकल देखि डराएको बिना तपाईँले चयन सहरमा कहीं जान स्वतन्त्रता आनन्द। तपाईं पनि झोला राखेँ र कहीं यो ले, एक्लै बाहिरी गतिविधिहरु वा कफी घर गरौं।
को Koowheel बिजुली स्केटबोर्ड सबैलाई प्रविधिको सिर्जना सुविधाको रमाइलो गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने सरल विचार सिर्जना भएको थियो। हामी बिजुली स्केटबोर्ड केही geeks लागि सिर्फ एक खेलौना छ कि लाग्छ छैन। भविष्यमा, यो यातायातका एक ब्रान्ड नयाँ वैकल्पिक रूप हुनेछ। यो एक ऊर्जा बचत वाहन छ। पक्कै पनि छोटो अवधि लागि नयाँ विकल्प रुपान्तरितको, वर्ग, सुपरमार्केट गएर र वरिपरि रही र किनमेल जाँदै लागि? के शहर वरिपरि खुला यात्रा गर्न सक्षम रहेको भन्दा बढी सुन्दर हुन सक्छ? यो एक नियमित स्केटबोर्ड भन्दा सवारी गर्न सजिलो छ। टाढाको नियन्त्रण प्रयोग तपाईं के गर्न छ सबै बोर्ड मा खडा र सवारी आनन्द छ।
© प्रतिलिपि अधिकार - 2015-2021: सबै अधिकार सुरक्षित। द्वारा Koowheel.com शक्ति